Fractional CO2 Laser Fekitori - China Fractional CO2 Laser Vagadziri, Vatengesi
High Quality Portable CO2 F ...
1060nm 4 Pazvibato Diode Lase ...
808nm Diode Laser Bvudzi Remo ...
Yakakwira Mhando Inotakurika CO2 Fractional Laser Vaginal Tightening Scar Mole Ganda Rejuvenation Machine
Smart scanning musoro, nyore kushanda uye kuchengetedza nguva. Musoro wekuvhiya unonyanya kushandiswa kucheka tag yeganda uye nzara dzakadzika, mukomboni nevus uye intradermal nevus etc. Gynecology misoro1, 360 ° uye 90 ° kurapwa, Goridhe Yakaputirwa vertebral muviri laser ine yakanyanya kuratidzika uye iri nani yekurapa maitiro. Gynecology misoro2, vulva labia kurapwa, Labia kuchenesa Melanin kubviswa. Aviation plug kunze inoshandisa yepamusoro simbi chiwanikwa, 24 goridhe kwakakurudzira solder pini mukati.Inoita kuti link ive yakavimbika uye fi ...
Fractional CO2 Laser Vaginal Tightening Laser Medical CO2 Laser Acne Scar Kubvisa Machine
Smart scanning musoro, nyore kushanda uye kuchengetedza nguva. Musoro wekuvhiya unonyanya kushandiswa kucheka tag yeganda uye nzara dzakadzika, mukomboni nevus uye intradermal nevus etc. Gynecology misoro1, 360 ° uye 90 ° kurapwa, Goridhe Yakaputirwa vertebral muviri laser ine yakanyanya kuratidzika uye iri nani yekurapa maitiro. Gynecology misoro2, vulva labia kurapwa, Labia kuchenesa Melanin kubviswa. Aviation plug kunze inoshandisa yepamusoro simbi alloy, 24 yegoridhe kwakakurudzira solder pini mukati.Inoita kuti link ive yakavimbika ...
Fractional CO2 Laser Machine Ine Girazi Tube
Fractional CO2 Laser Vaginal kusunga Machine
Akangwara scanning musoro, nyowani kiyi basa, tinya M kiyi kuti uchinje magirafu, refu dhinda masekondi matatu kugadzirira, '+' inogona kuwedzera saizi yemufananidzo, uye '-' inoshandiswa kudzikisa saizi yemufananidzo. Yakanakira vatengi kuti ishande. Laser emitter: Laser inotengeswa kubva kuUSA, Iyo yepamusoro simba inogona kusvika 100W, Hupenyu hwebasa: 2000 maawa. Iyo nyowani dimmer bracket inogona kudzikiswa pasina kubvarura muchina. 7 yakabatana ruoko rwakatsanangurwa, 360freely oparesheni, ichideredza zvakanyanya simba ...